४ दिनपछि अवरुद्ध अनारमनी सबस्टेसन सुचारु - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
४ दिनपछि अवरुद्ध अनारमनी सबस्टेसन सुचारु
जेठ २९, २०७५ 881 ऊर्जा खबर/झापा
झापास्थित १३२/३३/११ केभी अनारमनी सबस्टेसनमा नयाँ ट्रान्सफर्मर जडानपछि अवरुद्ध वितरण प्रणाली सुचारु भएको छ । ट्याप चेन्चरबाट तेल चुहिएर बिग्रिएकोे १६.६ एमभिएको ट्रन्सफर्मर हटाएर ६/८ एमभिएको अर्को ट्रान्सफर्मर जडान गरेपछि विद्युत आपूर्ति नियमित भएको हो ।
ट्रान्सफर्मरमा खराबी आउँदा गत शनिबारदेखि विद्युत सेवा प्रभावित भएको थियो । सबस्टेसनको ५० प्रतिशत लोड अन्यत्र पठाउनु पर्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो ।
अहिले ६/८ एमभिएको ट्रान्सफर्मर जडान गरेर बिग्रिएको ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न हेटौंडा पठाइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दुहबी ग्रिड शाखा प्रमुख अफताफ आलमले बताए । उनका अनुसार ट्रान्सफर्मर जडान गरेर चार्ज गरेपछि त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति नियमित भएको छ ।
२ वटा ट्रान्सफर्मर जडान भएको सबस्टेसनमा एउटामा खराबी आउँदा भद्रपुर र धुलाबरीमा लोड पठाएर प्राधिकरणले आपूर्ति व्यवस्था मिलाएको थियो । हरेक ४ घन्टामा एक पटक लोडसेडिङ हुने सूचना जारी गरेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
‘अहिले वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि ६/८ को ट्रान्सफर्मर जडान गरेका छौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘पूरानो ट्रान्सफर्मर मर्मत भएपछि पुनः जडान गर्छौं ।’
वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि अहिले जडान भएको ट्रान्सफर्मर पूरानोभन्दा कम क्षमताको भएकाले पूर्ण लोड नलिएमा धुराबारी सबस्टेसनमा पठाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।